लु अब फर्किई
BhawaniKhatiwada — Sun, 08/12/2018 - 12:41
शिथिल शरीर, वाक्य बसिसकेके अवस्था, लम्पसार परिरहेकै थिएँ । झिँगाहरू अनुहार, घाँटी, हात, खुट्टा, नाकका प्वालभरि ठेलमठेल गरेर पस्दथे, जहाँजहाँ मन लाग्यो त्यहाँत्यहाँ आउँथे, निर्धक्क बस्थे, आफ्नै सुरमा मस्तले चर्थे र उडेर जान्थे । यस्तो लाग्थ्यो कि अब मलाई झिँगाहरुले एकलौटी रुपमा आफ्नो नाममा नामसारी गरिसकेका छन् । घरका सदस्यहरू छेउछाउमा रहुन्जेल झिँगा आक्रमणबाट म मुक्त भए पनि एक दुई दिनको कुरा नभएको र महिना दुई महिनासम्म झिँगाको गोठालो लागेर साध्य नहुने भएकोको घरका सदस्यहरू यता उता भएपछि झिँगाको साम्राज्य मेरो शरीर हुने गरेको थियो । त्यही माथि फुर्सद पनि त मिल्नुपर्यो नि ।
HomSuvedi — Sun, 07/01/2018 - 12:53
समाजमा हुँदा रहेछन् । समाज पनि हुँदो रहेछ । समाज गजब छ । यसो विचार गर्छु र आफैं जिल्ल पर्छु ।
पुरानो र चलिरहेको कथा सम्झन्छु । नाम नभनौं । हुनुहुन्थ्यो उहाँ । यो कल्पना हैन सत्य र अति सत्य हो । मिर्चैयामा रक्सीको सेवनबाट मोक्ष पाउनेहरुको कुरा सुनेपछि आज मलाई उहाँको याद सारै आयो । उहाँ मात्र भनांै । उहाँको नाम दिनु पनि असल भएन किनभने जस्तो भए पनि उहाँका छोरा छँदैछन्, बुहारी छन् नातिनातिना छन् । सबै छँदैछन् । नभएका भने उहाँ र उहाँकी मात्र हुन् । भएकासँग दैनिक भेट भइरहन्छ । नभएको ता कता भेटिनु !
editor — Sun, 07/01/2018 - 04:21
editor — Fri, 03/30/2018 - 23:51
उनी दाहिने हातको चोर औँलामाथि माझी औँला खप्ट्याउँथे र सुँघ्थे । अचम्मैको बानी उनको । आफ्नो कार्यकक्षमा मिटिङमा मात्र होइन, अरू बेला पनि कसैसित कुराकानी हुन थाल्यो कि उनको दाहिने हातका औँलाहरू सक्रिय भइहाल्थे । एक दिन सोधेँ, ‘किन यसरी औँला सुँघ्नुहुन्छ दाइ ?’
संस्मरण : इराक यात्रा
editor — Sat, 08/05/2017 - 23:17
कुरा सन् २००५ को मध्यतिरको हो । नेपालको प्रहरी सेवामा कार्यरत रहँदा पनि चरम आर्थिक अभाव झेल्नु परेकोमा निकै तनावमा थिएँ म । श्रीमती र एक छोरालाई पनि सामान्य खर्च पुर्याउन पनि गाह्रो हुने । त्यसमाथि सँगै बस्न पनि नसकिने । कुनै दिन नून किन्ने पैसा नभएर अल्नो तरकारीसँग छाक टार्न बाध्य मेरो जीवन ! कसरी सुधारिन सक्छ यो सरकारी नोकरीले ? अनि कसरी राम्रो शिक्षा दिन सकिन्छ सन्तानलाई ? जीवनसाथीका न्यूनतम आवश्यकता पनि पुरा गर्न गाह्रो थियो । त्यसमाथि छुट्टिंदा भागमा परेको ऋणको ब्याज बुझाउन पनि गाह्रो साँबा त जिन्दगी भर तिर्न सक्ने उपाय थिएन ।
स्मृतिकाे पानाबाट - २
HomSuvedi — Mon, 07/31/2017 - 00:10
छन्द-चौतारीमा अघिल्लो बिहिबार दिउसो साढे एघारबजे मैले ‘स्मृतिका पानाबाट’ भन्ने संस्मरण लेखेको थिएँ । यसमा निकै राम्रा प्रतिक्रिया आए । समर्थन र प्रतिक्रिया दिनुहुने सबै मित्रहरुलाई हार्दिक धन्यवाद छ । मैले थाहै नपाएर पढेको 'सचित्र ठूलो वर्णमाला'का लेखकको नाम मलाई मित्र निर्मोही व्यासज्यूले सुझाउनु भो । सारै खुसी छु । कवि नीलहरि शर्मा ढकाल र उनका छोरा एकदेव ढकाल हुँनुहुँदो रहेछ यस पुस्तकका लेखक । बल्ल थाहा भयो ।
जागिरे जीवनका तीता मीठा अनुभूतिका संक्षिप्त झलक
editor — Sun, 05/07/2017 - 22:27
मानिसको जन्मदेखि मरण अवधी बीचको समय नै मानव जीवनको सफल र असफलताको मार्ग हो । संघर्षमय जीवनको यात्रामा कहिले सफल भइन्छ भने कहिले कुनै कर्ममा असफल पनि भइन्छ । तर असफलमा हुँदैमा निरास र सफलतामा हर्षित भएर हौसिने काम भने मबाट कहिल्यै भएन । मेरो जन्म हालको पर्वत जिल्लाको शंकरपोखरी गाविस वडा नं ४ ठूलाघरमा २००३ सालमा भएको थियो । मेरो जन्म हुँदा देशमा राणा शासन थियो । गरिबीले घरमा सताएको थियो भन्न पनि नहिचकिचाए हुन्छ । बढ्दै जाँदा अध्ययन गर्ने धारणा पलाएको तर त्यति वेला सहजरूपमा अध्ययनको लागि विद्यालयको सुविधा थिएन ।
दुई [मुक्तक] (मायाजाल बुन्नु हुन्न, जिउन मैले जानिन)
सिंह र मूसा
तिमी भन्छौ भने
म आउन सकिन दाजु (शिशु गजल)
म जोगी होइन
ज्ञानको ज्योति फेरी देशमा
गयौ तिमी टाढा
परेलीमै बोकी आँसु, घात लाँदैछु
इ नगरी छै विशेष (कविता)